ATC သစ်သား cnc router စက်
သစ်သား cnc router စက်
CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်အသိဉာဏ်ပြား ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ကိရိယာဟုလည်း လူသိများသည်။အမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၊ တင်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဒေါင်လိုက်အပေါက်တူးဖော်ခြင်း နှင့် ပန်းကန်ပြား၏ လွတ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးသည် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ပြီးမြောက်ပါသည်။၎င်းသည် manual ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ အစားထိုးပါသည်။ထို့ကြောင့်၊ ရိုးရာပရိဘောဂထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများအတွက် CNC blanking machine ၏ သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အဘယ်နည်း။ယနေ့ Jinan JCUT CNC စက်ကိရိယာကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ၏ထုတ်ကုန်များကို သင့်အားအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးရန်အတွက် နမူနာအဖြစ်ယူဆောင်လာသည်။
1. CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် ပြားများအသုံးပြုမှုနှုန်းကို များစွာတိုးတက်စေပါသည်။ပရိဘောဂဒီဇိုင်းကို ကွန်ပြူတာဖြင့် အပြီးအစီး ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပရိဘောဂများအရ၊ ဘုတ်အဖွဲ့၏အသုံးပြုမှုဒေတာကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပြီး ထို့နောက် ဘုတ်အား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဖြတ်တောက်ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော စာစီစာရိုက်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် အလွန်မြင့်မားပြီး 95% အထိ၊ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ကြိတ်ဖြတ်စက်ကို အသုံးပြု၍ မည်သည့် ဦးတည်ရာသို့ လှည့်၍ အထူးပုံစံများကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ရိုးရာလျှောစားပွဲလွှကို အဆုံးထိဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာရွက်အသုံးပြုမှုနှုန်းမှာ အလွန်နည်းပါသည်။လွှလွှ၏သခင်သည် ပုံများအတိုင်း တိပ်များကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။
2. CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။အလိုအလျောက် panel ပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အပြည့်အဝလည်ပတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီး edge banding လှည့်ပတ်ကြိုးကို အသုံးပြုပါက အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပြီး ၎င်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ edge banding အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။Sliding table saw သည် လည်ပတ်ရန် အနည်းဆုံး အလုပ်သမား နှစ်ဦး လိုအပ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် တစ်ဦး က အလုပ်သင် တစ်ဦးကို ဦးဆောင် နေပြီး လုပ်သား ပြင်းထန်မှု မြင့်မားပြီး ကျွမ်းကျင် လုပ်သား များကို စီမံခန့်ခွဲ ရန်မှာလည်း ခက်ခဲ ပါသည်။တစ်ရက်စာ တင်ပို့မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ CNC အဖွင့်ကိရိယာ၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့် အမီလိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
3. CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ လုပ်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်းသည် sliding table saw များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။အလိုအလျောက် panel ပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အနှောက်အယှက်ကင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး CNC အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊စားပွဲဆလိုက်ကို တွန်းပြီး ရပ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး အချိန်ကုန်ပြီး လုပ်အားကို ဖြုန်းတီးတဲ့ ဘုတ်ပြားကို ရွှေ့လိုက်ပါ။မှားယွင်းစွာ ချိန်ညှိပါက၊ အမှားအယွင်းနှုန်းသည် အလွန်မြင့်မားသည်။
4. CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ အစွမ်းထက်သော ဖုန်စုပ်စက်နှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော စက်ကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံသည် ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သော ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်လုနီးပါး လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ပြောရလျှင် စားပွဲခုံ၏ ဖုန်မှုန့်များသည် အလွန်ကြီးမားသည်။
5. CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်သည် အမိုက်စား အမျိုးအစား လည်ပတ်မှုနှင့် စီမံဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံပြီး သုညချို့ယွင်းမှုနှင့် သုညအမှားတို့ဖြင့် ကွန်ပျူတာဖြင့် တွက်ချက်သည်။လုပ်ဆောင်ချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာရှင်မှ ရိုးရှင်းသော လေ့ကျင့်မှုပြီးနောက်၊ ၎င်းကို လည်ပတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘေးကင်းပြီး အန္တရာယ်မရှိပေ။အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်လျှောစားပွဲလွှသည်လက်ဖြင့်တွက်ချက်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။စားပွဲတင်လျှောသည် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး အနည်းငယ် လျော်ကန်သင့်မြတ်သည်။ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်လျှင် ၎င်းသည် ပြုပြင်စရိတ်၊ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် အရည်အသွေး ဖြစ်စေ၊ CNC ဖြတ်တောက်သည့်စက်၏ စီမံဆောင်ရွက်မှုနည်းပညာသည် လျှောစားပွဲလွှဖြင့် မယှဉ်နိုင်ပါ။၎င်းသည် သုံးစွဲသူများကြား အလွန်ရေပန်းစားသည့် လက်ရှိ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏ အမြစ်လည်းဖြစ်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 24-2020
အခမဲ့ အတိုင်ပင်ခံ +8618006360664
အခမဲ့ အတိုင်ပင်ခံ +8615863173380